Maalinta: Abriil 24, 2019
Horumarinta Nadaafadda Qashin-xumida ee Metrobust!
Haweeney u safreysa magaalada metrobus dhinaca Avcılar kuma qanacsaneyn ninka agtiisa fadhiya oo boorsadiisa dhabarka saaray. Muddo ka dib, yaa u maleynayay in xaaladdu ay ugu wacan tahay dayax gacmeedyada, [More ...]
Maaddaama xaaladaha cimiladu ay fiicnaayeen, degmada Şanlıurfa Metropolitan District waxay bilaabatay xilli-roobaadka. Duqa magaalada Beyazgül, oo kormeeraya shaqooyinka laga bilaabay degmada Batıkent ee degmada Karaköprü, ayaa yidhi, olarak Sida Dawlada Hoose ee Magaaladda [More ...]
KNKX, oo laga furay Kocaeli Metropolitan Municipal ee Gebze City Square, 23 April Bandhigga Caruurta, Qoob-ka-ciyaarka dad-weynaha ayaa lagu qabtay waddamo kala duwan. 3 carruurta Abriil ee ka socota waddamada booqashada ku soo jirtay ayaa iyagu muujiyay [More ...]
Ankara Sivas Tababar Xawaaraha Sare Heerka Xaaladda Hadda
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Kaabayaasha İskurt iyo Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun ayaa baaritaan ku sameeyay Khadka Ankara-Sivas YHT, oo hadda uu socdo. Warbixin kooban oo ku saabsan horumarka mashruuca ka socda goobta dhismaha ee Elmadağ [More ...]
TÜDEMSAŞ Guddi Kulan ayaa la qabtay
Gudiga Agaasimayaasha TŞDEMSAŞ waxay isugu yimaadeen gudoomiyahooda Mehmet Başoğlu, Gudoomiyaha Gudiga Agaasimeyaasha iyo kuxigeenka Maareeyaha TÜDEMSAŞ, waxayna qabteen kulanka billaha ah ee guddiga caadiga ah. Xubnaha gudiga TÜDEMSAŞ Abdulfettah Çetinkaya, Bilal Tırnakçı iyo Süleyman [More ...]
Qiimaha Bilaabista Khadka Tababbarre Xawaaraha Sare ee Bursa-Yenişehir
Waxaan isku dayeynaa inaan wadaagno horumar kasta oo aan ka maqli karno dhamaadka 1992 iyo bilowga 1993 ee ku saabsan Mashruuca Tareenka ee Balıkesir-Bursa-Osmaneli. Waqtigaas… isbahaysiga DYP-SHP ayaa lahaa. Cavit Çağlar inuu noqdo Wasiiru Dowlaha Lambarka 2 ee Dowladda [More ...]
Iyada oo taageero laga helayo Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Ankara, Başkent Metros waxay sii wadaysaa inay albaabkeeda u furto fanaaniinta iyo farshaxanada. Dowladda Hoose ee Magaalada, oo u oggolaaneysa laamo badan oo farshaxanimo kala duwan inay horumariyaan oo ay ka helaan aagga waxqabadka ee caasimadda, waa jid hiwaayad ah. [More ...]
Ottoman Railways Taariikhda Boostada
Boqortooyadii Cusmaaniyiinta, Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka, ee loo ogolaaday tanaasulida tareenka, waxay lahaayeen aagag saameyn ku leh. France, Waqooyiga Giriiga, Galbeedka iyo Koonfurta Anatolia iyo Syria, England; Romania, Galbeedka Anatolia, Ciraaq iyo Basra [More ...]
RayHaber 24.04.2019 Warbixinta Shirka
Shaqada bridge waa la qaban doonaa adeegga nadiifinta ayaa loo qaadi doonaa Mashruuca Tareenka Qaranka ee Bixinta Qodobka Biyaha Baadha ah
Shaashadda qalabka elektiroonigga ah iyo shaashadda macluumaadka ee ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaalada Konya ee barta 55 ee bartamaha magaalada ayaa u fududeynaysa nolosha muwaadiniinta. Tilmaanta elektaroniga ah iyo macluumaadka ay bixiso Dowlada hoose ee Konya ee ku taal bartamaha magaalada [More ...]
Iyada oo ay socdaan hawlihii wadooyinka Harmanlı Neighborhood ee degmada Karacabey ee Bursa ayaa si xawli ah usocda, Duqa Magaalada Caasimadaha Alinur Aktaş waxay ka shaqaysaa wanaajinta tayada nolosha dhammaan xaafadaha miyiga. [More ...]
Maanta in History April 24 2006 'Kanan Man baahan tahay si ay tareenka Turkey ee la odhan jiray' olole deeq ahaa oo dhiiggooda loo soo abaabulay.